Iphuli kunye neNdawo yokuJonga ulwandle ngokuyinxenye @Karon – 650 m - I-Airbnb
Iphuli kunye neNdawo yokuJonga ulwandle ngokuyinxenye @Karon – 650 m
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguIra
😍 Akukho Komishoni ye-AirBnB 😍
👉 Akukho Mrhumo wokuCoca
👉 Izinto eziluncedo simahla
👉 Izaphulelo ezikhethekileyo zokuhlala ixesha elide
👉 Akukho ziNtlawulo ezongezelelweyo kwiiNdwendwe ezongezelelweyo
👉 Ibhedi yomntwana kunye nesitulo esiphakamileyo sasimahla kwisicelo
Eli gumbi lihle linamagumbi a-1 anendawo yokujonga igadi kunye nembonakalo yegadi engaqhelekanga kunye nemibono emangalisayo yolwandle kunye nehlathi elishinyeneyo ngeefestile zepanoramic! Ifakwe kwindawo ezolileyo nenoxolo kuphela yimizuzu esi-8 yokuhamba (650m) ukusuka kubuhle besanti emhlophe yaseKaron Beach. Kukho inani leevenkile eziluncedo, imivalo, iindawo zokutyela, iibhanki, izithuthuthu kunye neearhente ezirentisa ngeemoto, iivenkile zokuphulula, njl. njl. kude nesakhiwo.
Indawo yethu ikumgangatho wokuqala kwaye iyilwe kakuhle ukuba ibe likhaya lakho leholide ePhuket. Ibonelela ngebhedi yeesofa ezimbini & zokutsalwa ngaphandle eyenza ukuba iflethi ifanelekele izibini kunye neentsapho! Uya kufumana zonke izibonelelo ozifunayo ngexesha lakho leholide:
-Isantya esiphezulu esinikezelwe kwi-intanethi simahla;
-Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izinto zasekhitshini onokuthi uzifune ngexesha lokuhlala kwakho;
-Izixhobo zombane ezikumgangatho ophezulu kwiindidi ezininzi: ifriji, umatshini wokuhlamba, isicoci se-vacuum, i-microwave, umatshini wekofu, iketile, i-toaster, i-blender, intsimbi, isitovu, isomisi seenwele, ibhokisi ekhuselekileyo, ifeni, njl.;
-Ii-TV ezi-2 ze-TV ze-LED (kwigumbi lokuhlala kunye nakwigumbi lokulala) kunye namajelo e-cable TV kunye nentambo ye-HDMI ukudibanisa i-laptop yakho;
- Ibhedi yesofa yokutsala, iba yibhedi ephindwe kabini; iseti eyongezelelweyo yokulala kwibhedi ye-sofa enikezelwa simahla ukuba ucela ubuncinci iintsuku ezi-2 ngaphambi kokuba ungene (nceda, jonga iMithetho yeNdlu);
- Ibhedi yobukhulu bokumkanikazi ekhululekileyo;
-Ibalcony yabucala enebhegi yeembotyi isitulo kunye nefanitshala yangaphandle ukonwabela ichibi kunye nemibono yegadi engaqhelekanga kunye nemibono emangalisayo yolwandle kunye nehlathi elishinyeneyo;
- Iseti yeetawuli zondwendwe ngalunye, ezinebhafu, ubuso, kunye neetawuli zaselwandle;
- Iibhedi zeveki kunye nokutshintshwa kweetawuli ngaphandle kwentlawulo (nceda, jonga iMithetho yeNdlu);
- Umbane kunye namanzi zibonelelwa simahla (nceda ujonge iMithetho yeNdlu ngeenkcukacha ezithe vetshe);
- Ibhedi yomntwana (0-2 y.o.) kunye nesitulo esiphezulu sinokubonelelwa ngesicelo (ngaphandle kwentlawulo ukuba uceliwe ubuncinane iintsuku ezi-2 ngaphambi kokungena);
- Sinikezela ngeemoto zokurenta (ubuncinci - iintsuku ezisi-7; nceda ujonge amaxabiso ngokwexesha lonyaka);
- Ukuhanjiswa kwesikhululo seenqwelomoya kuyafumaneka kwaye kunconyiwe kakhulu (nceda, bona iMithetho yeNdlu ngeenkcukacha ezithe vetshe).
Umbuki zindwendwe ngu- Ira
Izimvo eziyi-5 748
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambon Karon